ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းအပစ်ရပ်ရေး စဉ်းစားဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ တပ်မတော်ပြော အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းအပစ်ရပ်ရေး စဉ်း...
22 ก.ย. 2562 - 10:24 น.
ပူးတွဲအပစ်မရပ်နိုင်တာရယ်၊ တပ်မတော်ရဲ့အပစ်ရပ်ကာလထပ်မတိုးတာကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာ တိုက်ပွဲတွေပိုများလာနိုင်
မြောက်ပိုင်း သုံးဖွဲ့ရဲ့ ပူးပေါင်းအပစ်ရပ်ရေး စဉ်းစားဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ တပ်မတော်ပြော
တပ်မတော်ဘက်က ဆန္ဒရှိပါက နှစ်ဘက်ပူးပေါင်းကာ အပစ်ရပ်ရေးလုပ်ဖို့အတွက် မြောက်ပိုင်းညီနောင် အဖွဲ့တွေက အဆင်သင့်ရှိနေတယ်လို့ စက်တင်ဘာ ၂၀ရက်က ထုတ်ပြန်တဲ့အပေါ် တပ်မတော်ဘက်ကတော့ စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးလို့ စက်တင်ဘာ ၂၁ရက်နေ့က တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
စစ်တိုင်းကြီး ၅ခုမှာ အပစ်ရပ်ကာလသက်တမ်း ထပ်တိုးဖို့ရှိမရှိအခြေအနေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဘီဘီစီရဲ့ မေးမြန်းမှုကို တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက အခုလို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပူးပေါင်းအပစ်ရပ်ရေးဆန္ဒရှိတယ်လို့ ထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက တပ်မတခုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် မြောက်ပိုင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ရပ်တည်ချက် အမှန်ကို ဖော်ပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့အတွက် တပ်မတော်အနေနဲ့ ပူးပေါင်းအပစ်ရပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တာလို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အပစ်ရပ်ထားတဲ့ စစ်တိုင်းငါးခုမှာလဲ အပစ်ရပ်ထားတဲ့ ကာလကိုထပ်တိုးဖို့ဆိုတာ မသေချာတော့ ဘူးလို့ ဘီဘီစီကိုပြောခဲ့သလို၊ ကာလထပ်မံတိုးမြှင့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းတပ်မတော်က အခုထိတရားဝင်သတင်း မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။
စစ်တိုင်း ၅ တိုင်းမှာ အပစ်ရပ် ထားတာ သက်တမ်းတိုးဖို့ မသေချာဘူးလို့ တပ်ဘက်က ပြော
"စဉ်းစားဆွေးနွေးစရာမလိုတော့ဘူး၊ မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့က အပစ်ရပ်တယ်လို့ထုတ်တာကလည်း ဖိအား တခုခုကြောင့်အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး လှည့်ဖြားတဲ့သဘောနဲ့ လုပ်တယ်လို့ယူဆရ တယ်။ …….ဒါက သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ထင်ထင်ရှားရှားပြသလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး" လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် ပလောင်လွတ်လပ်ရေးတပ် TNLA က ဗိုလ်မှူးမိုင်အိုက်ကျော်ကတော့ သူတို့အပစ်ရပ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးလိုတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ အပစ်ရပ် ကာလထပ်မတိုးတာက သူတို့အဖွဲ့တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပဲ၊ တိုက်ခိုက်လာရင်လည်း ခုခံစစ် အနေနဲ့ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ စက်တင်ဘာ ၂၁ရက်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့အပြင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ပါ ပါတဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်တို့ နှစ်ကြိမ်၊ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့အဖွဲ့နဲ့တကြိမ် စတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကို ကျိုင်းတုံမှာ လုပ်ထားပြီးပေမယ့် တိုက်ပွဲရပ်ဖို့ တိကျတဲ့အဖြေတော့မရသေးပါဘူး။
ဒါ့အပြင် နှစ်ဘက်သဘောတူ ပဏာမအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်မူကြမ်းပါ အချက်အလက်တွေကလည်း ဆက်လက်ညှိနှိုင်းဖို့ အများအပြားကျန်နေသေးတယ်လို့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကသိရပါတယ်။
စက်တင်ဘာကုန်တာနဲ့ မိုးရာသီကုန်မယ်၊ အောက်တိုဘာမှာ ရေကြီးနိုင်မှု မရှိဘူးလို့ မိုးဇလသုံးသပ်
အနောက်တောင်မုတ်သုံလေက စက်တင်ဘာလအကုန်နဲ့ အောက်တိုဘာ ပထမအပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကနေ လုံးဝဆုတ်ခွာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မုတ်သုံရာသီဖြစ်တဲ့ မိုးရာသီကုန်ဆုံးမယ်လို့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးဦးက စက်တင်ဘာ ၂၂ရက်မှာ ဘီဘီစီကိုပြော ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်မှာတော့ ရန်ကုန်ကအပါအဝင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေကနေ အနောက်တောင်မုတ်သုံလေက ဆုတ်ခွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မုတ်သုံရာသီကုန်ပေမယ့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပင်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မုန်တိုင်းတွေကြောင့်၊ လေပွေရိုင်း တွေကြောင့်ပါ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မိုးအနည်းငယ်ရနိုင်တာတော့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီမိုးတွေကြောင့် အဓိကမြစ်ကြီးတွေမှာ ရေကြီးရေလျှံတာတွေ မဖြစ်နိုင်ပဲ၊ အခြားမြစ် အသေးစားတွေမှာသာ ရေအဝင် များလာနိုင်တာပဲရှိမယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
မိုးသည်းထန်လို့ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ရေကြီးရေလျှံ
အခုမုတ်သုံထွက်တဲ့ကာလက ၁၉၈၁ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၀ခုနှစ်အထိ စံချိန်တွေအရဆိုရင် ပုံမှန်အနေအထား လို့ဆိုလို့ရပေမယ့်၊ မုတ်သုံအဝင်ကာလကတော့ နောက်ကျခဲ့တယ်လို့ မိုးဇလရဲ့ မှတ်တမ်းတွေအရ ဦးကျော်မိုးဦးက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၅နှစ်အတွင်းကတော့ မိုးအထွက်ကာလတွေမှ မိုးများခဲ့တာတွေရှိခဲ့လို့ ရေကြီးရေလျှံမှုတွေ ဖြစ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ်မိုးအထွက် စက်တင်ဘာလ အစပိုင်းတွေမှာတော့ ရွှေကျင်၊ မဒေါက်၊ ပဲခူး၊ ဘီးလင်း၊ စစ်တောင်း စတဲ့ မြစ်တွေမှာသာ မြစ်ရေတွေမြှင့်တက်ပြီး မြို့အချို့ ရေဝင်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်မှာ ကားမတော်တဆမှုကြောင့် တရုတ် ၄ဦးသေ၊ အများအပြားဒဏ်ရာရ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ယူထ ပြည်နယ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကားမတော်တဆမှုအတွင်း ကားပေါ်ပါလာတဲ့ တရုတ်ခရီးသွား အနည်းဆုံး ၄ ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ ၅ဦးထက်မက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ခရီးသွားတွေပါတဲ့ အဲဒီကားက ဘရိုက်စ် ကနွန်းအမျိုးသားဥယျာဉ်နားအရောက်မှာပဲ တစ်ဖက် ယာဉ်ကြောဘက်အထိ ကျော်တက်သွားခဲ့ပြီး ဘေးဝဲယာက အရှိန်ထိန်းလက်တန်းတွေကိုပါ တိုက်မိခဲ့ ပါတယ်။
ကားထဲမှာ တရုတ်ခရီးသွား ၃၁ဦးအထိပါပြီးတော့၊ အဲဒီထဲက ၄ဦးကတော့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူ တွေကတော့ အသေးစားထိခိုက်မှုတွေအပြင် အချို့က အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေထိ ရှိနေပါတယ်။
ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကတော့ ဘယ်လိုကြောင့် ကားမတော်တဆမှုဖြစ်လဲဆိုတာကို စုံစမ်းနေပါတယ်။
ကားမတော်တဆမှုဖြစ်တဲ့ သတင်းကို ပြည်နယ်စံတော်ချိန် ၁၁နာရီခွဲကျော်၊ သောကြာနေ့မှာ ယူထ ပြည်နယ်အဝေးပြေး ရဲတပ်ဖွဲ့ကရရှိခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းအပစ်ရပ်ရေး စဉ်းစားဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ တပ်မတော်ပြော အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ